चुडामणिपछि को- को छन् नेकपाको टार्गेटमा ? अब भ्रष्टहरुमाथि पालैपालो जनकारवाही हुने — Sanchar Kendra
चुडामणिपछि को- को छन् नेकपाको टार्गेटमा ? अब भ्रष्टहरुमाथि पालैपालो जनकारवाही हुने
त्यसपछि पनि सानातिना भ्रष्टहरुमाथि निरन्तर कारवाही जारी राखेको नेकपाले मंगलबार शर्मामाथि कारवाही गरेको हो । भ्रष्टाचारीहरूकाे व्यक्तिगत सम्पत्ति छानविन गरी राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने नेकपाको माग छ । शर्माजस्तै अन्य भ्रष्टाचारीहरूमाथि पनि नेकपाले कारवाही गर्ने जनाएको छ ।
२०७४ माघ २३ मा प्रकाशित ।